Baahin: Arbaca, May 25, Weriye Madar ~ Daljir ~ Bossaso. ?Ma jiro waqti kororsi ee waa in doorasho la qabtaa? War murtiyeed ka soo baxay shirkii Nairobi ee Golaha Ammaanka … Mudayaanal ka tirsan baarlamaanka federdaalka ah oo falcelis ka bixiyey war murtiyeedka ka soo baxay shirka Golaha Ammaanka ee Qaramaad Midoobay … Qaxooti ku sugan dalka Italy ka mudaaaraaday xaalada nololeed ee qaxootiga ku nool dalka Italy; mid ka mid ah ayaan waraysanay … Ardayda jaamacada Muqdisho, faraca Boosaaso oo saaka uu u bilawaday imtixaankii ugu badmeeyey ee semisterka 2-aad ee sannad-dugsiyeedka 2010/2011 … – Radio Daljir
Baahin: Arbaca, May 25, Weriye Madar ~ Daljir ~ Bossaso. ?Ma jiro waqti kororsi ee waa in doorasho la qabtaa? War murtiyeed ka soo baxay shirkii Nairobi ee Golaha Ammaanka … Mudayaanal ka tirsan baarlamaanka federdaalka ah oo falcelis ka bixiyey war murtiyeedka ka soo baxay shirka Golaha Ammaanka ee Qaramaad Midoobay … Qaxooti ku sugan dalka Italy ka mudaaaraaday xaalada nololeed ee qaxootiga ku nool dalka Italy; mid ka mid ah ayaan waraysanay … Ardayda jaamacada Muqdisho, faraca Boosaaso oo saaka uu u bilawaday imtixaankii ugu badmeeyey ee semisterka 2-aad ee sannad-dugsiyeedka 2010/2011 …
Maajo 25, 2011 12:00 b 0
Minnesota: Dadwaynaha oo looga digay isticmaalka waxyaabaha la isku caddeeyo, kadib markii la ogaaday in ay ku jiraan sun khatar ah.
Baahin: Salaasa, May 24, Weriye Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. ?Umadda Soomaalidu waa tashan wayday ee waa loo talin; Madaxda federaalkuna way ku fashilmeen hawshii loo igmaday” M/weyne Faroole … Wafti uu horkacayo M/weyne Shariif, uuna ka mid yahay R/wasaare Farmaajo, oo gaaray Nairobi, kana qayb galaya shirka Golaha Ammaanka ee lagu qorfayn doono arrimaha Somaliya … Diyaarad siday lacag dhan 4 milyan oo doollar oo budhcad badeed leedahay oo lagu qabtay madaarka Muqdisho; Col. Bariise, afhayeenka ciidanka bileyska ayaan waraysanay … Saraakiisha ciidanka dawlada fderaalka ah oo tafaasiil ka bixiyey guulo ay sheegeen in ay ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyey ee ay isaga hor yimaadeen Al-shabaab …